June 2013 ~ Myanmar News Updates
Evaer Video Recorder for Skype 1.3.6.22 For Pc 12MB
10:35:00 AM Myanmar News Updates No comments
Evaer Video Recorder အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
နောက်ဆုံးထွက်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် အခုဗားရှင်းမှာ ၀င်းဒိုး 8 မှာလည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်
http://www.evaer.com/ မှာလေ့လာပြီး ကြိုက်ရင် အောက်ကလိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ်
ဖုန်းအလကားပြောချင်သူများအတွက် ဆော့ဝဲကောင်းလေးတစ်ခု Viber
9:40:00 AM Myanmar News Updates No comments
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ အသုံးတည့်လို့သုံးနေကြသူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်
မသိသေးသူတွေ သုံးရအောင် ထပ်ဆင့်မျှဝေလိုက်ပါတယ် ။ ဖုန်းထဲမှာ Viber
ဆော့ဝဲထည့်ထားရင် ဆော့ဝဲရှိတဲ့ ဖုန်းအချင်းချင်း Gtalk ပြောသလိုပြောလို့ 
အဆင်ပြေတယ် ။အင်တာနက်တော့ ချိတ်ထားရမယ် ။ အဲ့ဆိုရင် ဖုန်းထဲက
ပိုက်ဆံ စားမသွားဘူး ။ မြန်မာပြည်ကလူတွေ ပြည်ပကို ခေါ်ချင်ရင်လည်း
အဆင်ပြေနိုင်သလို ၊ ပြည်ပကလူတွေ မြန်မာပြည်ကဖုန်းကို ခေါ်ဖို့ လည်း
ပိုက်ဆံကုန်သက်သာပါတယ် ။အဓိက အရေးကြီးတာက ဖုန်း၂လုံး စလုံးမှာ
အင်တာနက်ချိတ်ဖို့ နဲ့ဆော့ဝဲရှိဖို့ ပဲလိုတယ် ။ ချက်တင်တွေလည်း ရသလို
ပုံတွေပို့ ရင်လည်း မြန်တယ် ။ ဖုန်းတိုင်းတော့မရပါဘူး ။ နောက်ပေါ်တဲ့ ဖုန်း
တွေမှာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ် ။ Android နဲ့IOS တွေ မှာ ပိုအဆင်ပြေတယ်
Samsung နဲ့Iphone တွေမှာတော့ အဆင်ပြေနေကြတာ ။ကျန်တာတွေကို
ဆက်လက့်လေ့လာကြည့်ပေါ့ အဆင်ပြေနေတဲ့ ချစ်သူ ခင်သူတွေကတော့
ပိုပြီးကိုင်သင့်ပါတယ်။ ဖုန်းခလည်းသက်သာတယ် ။Viber ထည့်တဲ့ဖုန်းတွေ
အကုန် အလကားခေါ်.. .. အင်တာနက်ကလည်း DiGiလိုင်းသုံးရင် တစ်ရက်မှ
တစ်ကျပ် ၊ တစ်လ ဆို 30 RM ။ လိုင်းအား သိပ်မကောင်းပေမယ့် Facebook
Gtalk ၀က်ဆိုဒ်လျှောက်လည် စာဖတ်လို့ အေးဆေးပဲ ဗီဒီယိုတွေကြည့်ချင်ရင်
လိုင်းပိုကောင်းတာသုံးလိုက် ကဲ အဆင်ပြေချင်သူတွေ စမ်းကြည့်စေဖို့ .........။
ဒီမှာ Download ယူ - http://www.viber.com/
Download For - Samsung Model
Download For - Iphone ( IOS)
Download For - Balckberry
Post by http://thodarmgmg.blogspot.com/
TSF Shell v1.9.9.5.4 (Louncher )
9:36:00 AM Myanmar News Updates No comments
TSF Shell v1.9.9.5.4 (Louncher ) လေးပါ
ဖုန်းလေးမှာ ပုံစံ အသစ်ကလေးနဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ အကောင်လေးပါ ..
ကြိုက်တဲ့ ပုံစံလေးတွေ ပြောင်းသုံပေါ့ ..
ဒါလေးဆိုရင် အရေမ်းကောင်းတယ် 3D ပုံစံ လေး
To Down>> http://www6.zippyshare.com/v/47065372/file.html
အဆင်ပြောပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ် ..
ဇနီးရဲ့ ခံစားမှုဘဏ်တိုက်ထဲ သင်ဘာတွေစုဆောင်းသင့်သလဲ?
ခင်ပွန်းရဲ့ ခံစားမှုဘဏ်တိုက်ထဲ သင်ဘာတွေစုဆောင်းသင့်သလဲ?
၂) သူ့အလုပ်အကိုင်ကို ဂရုပြု(စောင့်ရှောက်)ပါ
၄) သူ့စိတ်လိုအင်ကို ဖြည့်ပါ
၆) သူ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ သူ့အကျင့်စရိုက်ကို လေးစားတန်ဖိုးထားပါ
၇) အခြေအနေ၊ အချိန်အခါကိုကြည့်ပြီးမှ ပြဿနာကို ဆွေးနွေးတင်ပြပါ
၈) သူနှစ်သက်တဲ့ ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ပါစေ
၉) ကိုယ့်ကိုအမြဲ လှပသန့်ရှင်းအောင် ပြင်ဆင်ပါ
၁ဝ) သူ့မိဘကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ပါ
ချစ်သူရဲ့ ခံစားမှုဘဏ်တိုက်ထဲ သင်ဘာတွေစုဆောင်းသင့်သလဲ?
၃) ခွင့်လွတ်နားလည်မှုတွေ ပေးပါ
၇) ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ပါးစပ်ဖျားမှာ ချိတ်ထားစရာမလိုပေမယ့်
၁ဝ) သူ့ကောင်းကွက်ကို ပိုမြင်ပြီး ဆိုးကွက်ကို လျှော့ကြည့်ပါ
သူငယ်ချင်းရဲ့ ခံစားမှုဘဏ်တိုက်ထဲ သင်ဘာတွေစုဆောင်းသင့်သလဲ?
၁) သူရင်ဖွင့်တဲ့စကားကို နားထောင်ပေးပါ
၉) ကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ ပျော်စရာ၊ ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေ သူ့အတွက် တစ်ပုံအမြဲရှိပါစေ
၁ဝ) ကိုယ့်ခံစားချက်ကို သူနဲ့အတူ မျှဝေပါ
လူ့ဘဝက ရှုတ်ထွေးပွေလီလှတယ်။ တစ်ခါတရံမှာ ထိန်းချုပ်မှုတွေ ကင်းလွတ်ပြီး ကိုယ့်ချစ်သူ၊ ကိုယ့်ကြင်ဖော်၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို ထိခိုက်နာကျင်တဲ့စကားတွေ ပြောဆိုမိတတ်တယ်။ ခံစားမှုဘဏ်တိုက် အကောင့်လေး overdraft မဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံးနည်းက - ကောင်းတဲ့စကား၊ ကြည်နူးတဲ့စကား၊ ပြုစုယုယမှုတွေ၊ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှုတွေပုံမှန်စုဆောင်းတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သူ့ကို ကိုယ်ချစ်သေးတယ်ဆိုရင်
သူပျော်ရွှင်ဖို့ သူချစ်တဲ့သူနဲ့ အတူနေခွင့်ပေးလိုက်ပါ
အရင်းနှီးဆုံး သူစိမ်းတွေပဲ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
ကိုယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးကို မင်္ဂလာဝတ်စုံ ဝတ်မပေးနိုင်ရင်
ကျေးဇူးပြုပြီး သူ့အင်္ကျီကြယ်သီးကို ဖြုတ်နေတဲ့ ရှင်လက်တွေ ရပ်လိုက်ပါ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တာ တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။
ကိုယ့်ကို "ချစ်တယ်" လို့ပြောတဲ့အခါ
အင်တာနက်ပေါ်ကတွေ့တဲ့ "အချစ်"တွေပါ။ ဘာသာပြန် မျှဝေပါတယ်.....
12:32:00 PM Myanmar News Updates No comments
Android သမားတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေးပါ ။ VZO Chat ကို Android ဖုန်းအတွက် ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ ။ ဖုန်းကနေ PC သို့ ။ PC ကနေ ဖုန်းသို့ လှန်းပြီး Video Call ချက်နိူင်ပါပြီ ။
တကယ်တော့ VZO Chat ဆော့ဝဲကိုဟာ မြန်မာ Developer တွေ ရေးထားတဲ့ Program တစ်ခုပါ ။
ယခုအခါမှာ Android ဖုန်းအတွက်လဲ မြန်မာDeveloper များ ထွက်ရှိပေးလို့ လာပါပြီ ။
VZO Chat ဆော့ဝဲကိုလဲ Conferendo Video Chat ဆိုပြီးနာမည် ပြောင်းလိုက်ပါပြီ ။ သင့် PC မှာရှိတဲ့ VZO ဆော့ဝဲကို အပ်ဒိတ်လုပ်လိုက်ပါ ။
www.vzochat.com ကိုလဲ www.t3.conferen.do/en/ သို့ အမည်ပြောင်းလိုက်ပါပြီ ။
"""" သင့်လက်ရှိ် VZO အကောင့်ကို ထည့်ပြီး အသုံးပြုနိူင်ပါပြီ """"
VZO ဆော့ဝဲကို လိုချင်သူများ ဒီမှာဒေါင်းယူပါhttp://freemobilesharing.blogspot.com/2013/05/conferendo-video-chat-for-android-pc.html#.UZbXlhIrZFg
website နှင့် VZOchat application တို့ကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ကာ နောက်ဆုံးပေါ် version အနေဖြင့် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ယခုအချိန်မှစပြီး ၀န်ဆောင်မှုကို မြန်မာဘာသာဖြင့် မြင်တွေ့နိုင်ပါ ပြီ။ အမှားအယွင်း တစ်စုံတစ်ရာ တွေ့ရှိပါလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အား လွတ်လပ်စွာ ဆက်သွယ်ပြောဆို ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
မူရင်းဆိုက်ရဲ့ အပေါ်နားမှာ နိူင်ငံအလံတွေပြထားပါတယ် နှိပ်လိုက်ပြီး ကြိုက်တဲ့နိူင်ငံအလံကိုရွေးလိုက်ပါ ဆိုက်ကို Language ပြောင်းပြီးဖတ်ရှု လေ့လာနိူင်ပါတယ် ။ မြန်မာအလံကိုနှိက်လိုက်ရင် မြန်မာဘာသာနဲ့လေ့လာနိူင်ပါတယ် တိုက်ရိုက်သွားချင်ရင်တော့ ဒီမှာနှိပ်ပါ
လေးစားစွာဖြင့်၊ VZOchat အသင်း
5:22:00 PM Myanmar News Updates No comments
အဖေ့ တ ပြီး မှားမှားမှန်မှန်
Evaer Video Recorder for Skype 1.3.6.22 For Pc 12M...